कस्लाई हेरी लजाएको ?
नारायण अधिकारी, (ऊडब्रिज, भर्जिनिया)
नौलो देश नौलो भेष फरक रहेछन् मनहरु ।
चन्दन हुने, फूल फुल्ने थोरै हुन्छन् बनहरु ।।
पलासको फूलमा किन पाइदैन गन्ध ?
कस्लाई हेरी लजाएको हाँसी मन्द मन्द ?
खोला नाला तिम्लाई हेरी सुसाउछन् किन ?
चन्द्रमा नि तिम्लाई देखी लजाउछ किन ?
तिमी आउँदा मनभित्र युद्द जस्तो द्वन्द्व ।
कोपिला नि तिमी देखी टक्क अडिन्छ ।
छ्ड्के नजर शुल तिम्रो मुटु गडिन्छ ।।
प्रतिबिम्ब आफ्नैअघि देख्छु खण्ड खण्ड ।
रातमा तिमी जुन बन दिनमा बन घाम ।
पुजुन् तिम्लाई प्रकृतिले साँझ बिहान ।।
खोजे जस्तै कस्तुरीले आफ्नै सुगन्ध ।